August 2020 - राष्ट्रखबर
दुई फोटो पत्रकारमा कोरोना संक्रमण
दुई फोटो पत्रकारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोमवार काठमाडौंमा कार्यरत दुई जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
पीसीआर गराएका मध्य २ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहका महासचिव प्रदीप राज वन्तले जानकारी दिए ।
काठमाडौंमा रहेका विभिन्न संञ्चार गृहमा कार्यरत १२५ जना फोटोपत्रकारहरुको पिसिआर टेष्टको लागि स्वाब संकलन गरी परीक्षण गरिएको थियो । राष्ट्रिय फोटोपत्रकार समूह नेपाल र फोटोपत्रकार क्लवको संयुक्त पहलमा कोरोना परीक्षण गरिएको थियो ।
नेपाल जेसिज नेसनल एसडीजी कमिटि अन्तर्गतको १७ औं मेजरर्स अफ एसडिजीको कार्यक्रम सम्पन्न
नेपाल जेसिज नेसनल एसडीजी कमिटि अन्तर्गतको “17 Measures of SDG – Every week SDG week” को समापन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको आइतबार बेलुका ८ बजेदेखि १० बजेसम्म भर्चुवल रुपमा हँदै आइरहेको थियो।
हरेक हप्ता गर्दै आइरहेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न शाखाहरुले आयोजना गर्दै आएका हुन् । समापन कार्यक्रममा नेपाल जेसिजका राष्ट्रिय अध्यक्ष जेसिआई सिनेटर अशोक शंखर प्रमुख अतिथिका रुपमा हुनुहुन्थ्यो। उक्त कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रुपमा नेशनल इन्फोर्मेशन अफिसर अफ युएन रेसिडेन्ट कोअरडीनेटर अफिस/युएन इन्फोर्मेशन सेन्टर राम बाबु शाह र युएन रेसिडेन्ट पब्लिक इन्फर्मेसन मेनेजर शिम्रिका शर्मा हुनुहुन्थ्यो।
त्यसैगरी कार्यक्रममा अतिथिका रुपमा नेपाल जेसिज नेसनल एसडीजी संयोजक जेसिआई सिनेटर आशिष शर्मा,नेसनल एसडीजी मेम्बर जेसिआई सिनेटर मनिता जोशी,नेसनल एसडीजी मेम्बर जेसी विकास मान श्रेष्ठ,नेपाल जेसिजका राष्ट्रिय कार्यकारीणी उपाध्यक्ष जेसी शोभा खरेल,जेसी लालमणि भण्डारी,विजय गुरुङ,गोकुल सापकोटा,शोभा खरेल,नेपाल जेसिजका राष्ट्रिय महासचिव जेसिआई सिनेटर टेकराज रेग्मी,पाल जेसिजका राष्ट्रिय कानुनी सलाहकार जेसी राजेन्द्र घिमिरे,नेपाल जेसिजका राष्ट्रिय कोषाध्यक्ष जेसी बिमल रिमाल,चिफ एग्जिक्युटिभ असिस्टेन्ट टु नेशनल प्रेसीडेन्ट जेसिआई सिनेटर रविन पोख्रेल,नेपाल जेसिजका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जेसिआई सिनेटर कन्चन झा,जेसी कृष्ण सापकोटा,जेसी गोबिन्द पंगेनी,जेसी मंजु शाह ठकुरी,जेसी राम बहादुर बोगटी,जेसी बिशाल थापा,जेसी अनवर हुसैन,जेसी धिरज शाही,जेसी शिव प्रसाद सापकोटा,जेसी रमा प्याकुरेल र जेसी गणेश साउद हुनुहुन्थ्यो।
कार्यक्रममा नेपाल जेसिजका अन्य राष्ट्रिय पदाधिकारीहरु,शाखा अध्यक्षहरु र नेसनल एसडीजी संयोजकहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय गानको सम्मानबाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा जेसिज आस्था पाठपछि जेसी स्वेता थापाले जेसिआई भिजन – मिसन पढ्नु भएको थियो। कार्यक्रमको उद्घोषण जेसी ओशिन ओलीले गर्नु भएको थियो।कार्यक्रममा नेसनल एसडीजी मेम्बर जेसिआई सिनेटर मनिता जोशीले सम्पूर्णलाई स्वागत गर्नु भयो।
कार्यक्रममा सबै एरियाको प्रतिनिधि गर्दै चार जना शाखा अध्यक्षहरुले आफ्ना अनुभव राख्नु भएको थियो। त्यसैगरि लोम एसडीजी संयोजकहरुले कार्यक्रमका बेला आफुहरुले अनुभव गरेका कुराहरु राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं नेपाल जेसिजका पुर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष जेसिआई सिनेटर अशोक शंखर र विशिष्ट अतिथि नेशनल इन्फोर्मेशन अफिसर अफ युएन रेसिडेन्ट कोअरडीनेटर अफिस/युएन इन्फोर्मेशन सेन्टर राम बाबु शाहले आफ्नो मन्तब्य राख्नु भएको थियो।
कार्यक्रममा नेपाल जेसिजका नेसनल एसडीजी संयोजक जेसिआई सिनेटर आशिष शर्माले उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो साथै एसडीजी अन्तर्गतका कार्यहरु जेसिआई नेपालले समुर्ण शाखाहरुलाई समेटेर गर्न पाउदा आफु निकै खुसि रहेको बताउनु भयो । शर्माले आगामी दिनहरुमा पनि जेसिजले एसडीजी अन्तर्गतका कार्यहरुलाइ निरन्तरता दिने र आगामी दिनमा एसडीजी एकेडेमी पनि सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
डाक्टर भोला रिजालका दम्पतीमा कोरोना पुष्टि, ह्याम्सको आइसोलेसनमा भर्ना
वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजालका दम्पतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि डा. रिजाल दम्पती ह्याम्स अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा भर्ना भएका छन्। शनिबार गरिएको पिसीआर परीक्षणमा आफू र पत्‍नी दुवैलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको डा. रिजालले बताए।
‘विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालन’ १ असोजबाट मात्रै
सरकारले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण स्थगित परीक्षा भदौ महिनाभरी सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालन’ १ असोजबाट मात्रै गर्न दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
यसअघि ५ साउनमा १ भदौबाट र २६ साउनमा १६ भदौबाट परीक्षा सञ्चालन र विद्यार्थी भर्ना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । कोभिड-१९ संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले विद्यार्थी भर्ना गर्ने मिति सारेको हो ।
४ सय ९ जना नेपाली नागरिक घर फर्किए,४ वटा शवसमेत
सोमबार विदेशबाट ४ सय ९ जना नेपाली नागरिक घर फर्किएका छन् । त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार सोमबार हिमालय एयरलाइन्सले अबुधावीबाट १ बच्चासहित १ सय ५५ जना नेपाली घर फर्किएका छन् ।
उता, नेपाल एयरलाइन्सले भने दुबईबाट २ सय ५४ जना नेपालीलाई घर ल्याएको छ । यो उडानबाट ४ वटा शवसमेत नेपाल ल्याइएको छ ।
दुबईबाट नेपाल आउने क्रममा टिकट काटिसकेका केही नेपाली भने ओभर स्टेका कारण जरिवाना बुझाउन नसकेपछि विमानस्थलमै रोकिएको बताइएको छ ।
लामो समय ओभर-स्टे हुादा उक्त मुलुकको अध्यागमनको चर्को शूल्क तिर्न नसकेका करीव डेड दर्जन नेपाली दुबई एयरर्पोर्टमै रोकिएका छन् । सोमबार राती हिमालय र नेपाल एयरलाइन्सको जहाज दोहाका लागि उड्दैछन् । यी जहाज यात्रु बोकेर भोली नेपाल आउनेछन् ।
काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाइ कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाइ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
उनलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएसँगै अहिले उनी आइसोलेसनमा रहेको जनाइएको छ।
दुई दिनअघि स्वाब दिएका उनलाई सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो।
मेयर शाक्यको सचिवालयका अनुसार उनकी पत्निलाई खोकी देखिएपछि दुवै जनाको स्वाबको परीक्षण गरिएको थियो। पत्नीकाे रिपाेर्ट भने नेगेटिभ आएकाे छ।
उपत्यकामा थप २ सय ९८ जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौं उपत्यकामा थप २ सय ९८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको नियमित कोभिड १९ प्रेस ब्रिफिङमा पछिल्लो २४ घण्टामा उपत्यकाका ३ जिल्लामा २ सय ९८ जना संक्रमित फेला परेको जानकारी दिइएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले काठमाडौंमा १९०, ललितपुर ६७ र भक्तपुरमा ४१ जना संक्रमित भएको बताए ।
आइतबार मात्रै उपत्यकामा ४ सय २९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । आइतबार काठमाडौंमा ३७२, ललितपुर १२ र भक्तपुरमा ४५ जना संक्रमित भएका थिए ।
८ सय ९९ कोरोना संक्रमित थपिए, संक्रमितको संख्या ३९ हजार ४ सय ६० पुग्यो
पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप ८ सय ९९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना पुष्टि हुनेमा ३ सय ३ जना महिला र ५ सय ९६ जना पुरुष रहेका छन् ।
मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा सोमबार प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमका अनुसार नयाँ थपिएका कोरोनाका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३९ हजार ४ सय ६० पुगेको बताएका छन् ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोनामुक्त भएर ५ सय ८८ जना डिस्चार्ज भएका छन् । यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनामुक्त हुनेको संख्या २१ हजार ४ सय १० जना पुगेको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप ७ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ सय २८ पुगेको छ ।
यसैगरी नेपालमा आइसोलेसनमा रहने कोरोना संक्रमित १७ हजार ८ सय २२ जना छन् भने ७ हजार ३ सय ३७ जना क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रवक्ता गौतमले बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुुसार सोमबारसम्म पीसीआर विधिबाट ६ लाख ९३ हजार ४७२ परीक्षणहरु गरिएका छन् । त्यसैगरी २४ घण्टामा जम्मा ११ हजार १२९ पीसीआर परीक्षण भएका छन् ।
भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको ८४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।
मुखर्जीका छोरा अभिजितले आफ्ना पिताको निधन भएको जानकारी दिएका हुन्।
‘गह्रौ मुटुका साथ यहाँहरुलाई जानकारी गराउनुपरेको छ कि हामी र आरआर हस्पिटलका डाक्टरहरुको सबै प्रयास र भारतभरका जनताको आर्शिवाद र प्रार्थनाका बाबजुद पनि मेरा पिता श्री प्रणव मुखर्जीको भर्खरै निधन भएको छ। यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद,’ ट्विटमा अभिजितले लेखेका छन्।
पछिल्लो समय मुखर्जी कोममा गएका थिए। उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो।
दिल्लीस्थित आर्मी रिसर्च एन्ड रेफरल हस्पिटलले सोमबार मात्र एक विज्ञप्ती जारी गरेर मुखर्जीको स्वास्थ्य अवस्था झनै बिग्रिएको बताएको थियो।
सोमबार भेन्टिलेटरमा उपचाररत मुखर्जीको फोक्सोमा संक्रमण देखिएका कारण उनलाई सेप्टिक सक ‘कम रक्तचापको अवस्था’ भएको अस्पतालले बताएको थियो।
उनलाई विशेष डाक्टरहरुको निगरानीमा राखिएको थियो। हालै मस्तिष्क सर्जरी गराइएका मुखर्जीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको थियो।